डिपेन्डेन्ट भिसामा अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यसरी हुन्छ डिपेन्डेन्ट भिसा प्रक्रिया - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अष्ट्रेलिया । कंगारुको देश अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाईमा रहेको छ । त्यसमध्ये व्यावसायिक विषयको रोजाइ धेरै पर्ने गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म अमेरिका र बेलायतमा अध्ययन गर्ने सपना हुने गरेता पनि पछिल्लो समय विद्यार्थीको विदेश अध्ययनको गन्तव्य फेरिएको छ । अधिकांश विद्यार्थीहरू अष्ट्रेलिया गएर अध्ययन गर्ने सपना सजाउन थालेका छन् । वैदेशिक अध्ययनको प्रमुख गन्तव्य अब अष्ट्रेलिया बन्न थालेको छ ।
विगत केही वर्षदेखि विद्यार्थी भिसा र डिपेण्डेण्ट भिसामा अष्ट्रेलिया जानेको सङ्ख्या बढेको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य देशको तुलनामा अष्ट्रेलिया जान सहज, आवश्यक कागजपत्रको तयारी, विषय छनोट र डिपेण्डेण्ट भिसामा जान केही खुकुलो नियम भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण त्यसतर्फ बढेको उनीहरूको भनाइ छ । अष्ट्रेलियाको शिक्षा प्रणालीले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएको छ ।
हुन त विद्यार्थीहरू अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गएर मात्र दक्ष बन्ने होइन । उनीहरूले कस्तो शिक्षण संस्था छनोट गर्छन् भन्नेमा पनि भर पर्छ । उनीहरूको चाहना अष्ट्रेलिया गएर रोजगारी गर्ने र पैसा कमाउने मात्र हुने गरेको छ । नेपाली विद्यार्थीहरूको रोजाइ सस्तो शिक्षण संस्था हुने गरेको छ ।
अष्ट्रेलियन सरकारले ल्याएको नयाँ भिसा नियम: धेरैले पिआर नपाउने सम्भावना,नर्सलाई झनै कठिन !
अष्ट्रेलिया । आप्रवासीको अध्यागमन सम्बन्धी अष्ट्रेलियन सरकारले ल्याएको नयाँ भिसा नियम छिट्टै नै देशभर […]